🥇 ▷ Xiaomi Mi Router Wifi 6 router AIoT AX3600 hadda waa kuu diyaar… ✅
Shirkii ugu weynaa ee khadka tooska ah ee bishii Febraayo, Xiaomi wuxuu ku soo bandhigay router-ka ugu casrisan marka lagu daro alaabada ugu dambeysa. Xiaomi AIoT AX3600 router wuxuu lashaqeeyaa halbeega cusub ee 6 6, wuxuu leeyahay 7 anteeno ama 6 kor u qaada digniinta. Waan ognahay meesha aad ka codsan karto meel kasta oo adduunka ka mid ah.
Sidoo kale aqri: Xiaomi FIMI PALM Gacanta Gimbal Camera, ayaa tartan loo galay DJI Osmo Pocket. Ku iibsato $ 169.99 (kuubanno ah)
Horey noogu sii soco
Dabcan, uma baahnid inaan mar dambe soo bandhigno iibiyaasha Banggood. Midda ugu cusub Xiaomi AIoT AX3600 router, oo hadda lagu heli karo dalabka horudhaca, waa dalabkii ugu horreeyay. Amarka ugu horreeya waa in la diro wixii ka dambeeya Maarso 14 / Maarj 2020. Sababtoo ah tani waa badeecad cusub, waa waxoogaa sugitaan ah oo la keeno.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah helitaan. Wadada mudnaanta EU, xitaa taas gabi ahaanba waa bilaash . Gaadiidkaan waad ku mahadsan tahay uma baahnid inaad bixiso canshuur ama moms, iibiyaha wax walba ayaa daryeeli doona.
Heerka WiFi ugu dambeeyay 6
Xiaomi AIoT AX3600 router wuxuu la shaqeeyaa kuwa ugu dambeeyay Wifi 6 802.11ax heerka caadiga ah ee taageeraya 2.4 GHz iyo 5 GHz band Heerka ugu sarreeya ee gudbinta aragti ahaan ee labada guuto waa ilaa 2976 Mbps .
Anteenada AIoT ee madaxa-bannaan waxay sidoo kale taageertaa labada baandar oo leh ugu badnaan. Xaddiga wareejinta 583 Mbps.
Heerka caadiga ah ee WiFi 6 gaadho 2.7 laab WiFi 5 jiil hore Isugeyn cusub ayaa la isku daray TWT teknolojiyadda si loo badbaadiyo awooda Kani wuxuu saxayaa habka hurdada ee qalabka markii aan loo baahnayn isgaarsiin, taas oo si weyn uga geleysa badbaadinta korantada.
Waxay sidoo kale ka adkaataa darbiyada qaro weyn
Router-kaani waa mid xiisa leh oo kaliya ma aha cabiraadihiisa laakiin sidoo kale wuxuu u yahay naqshadeyn farsameedkiisa weyn. Tan waxaa badanaa lagu xalliyay illaa 7 anteeno adag, kaas oo loo qaybiyo dhismaha oo dhan.
Mid ka mid ah qalabka IoT, labana kooxda baandada. 2.4 GHz, iyo ilaa afar waxay leeyihiin band 5 GHz ah. Tani waxay xaqiijineysaa inay si ku filan u daboosho dhammaan xirmooyinka.
Sidoo kale aqri: Roborock S5 Max Laser Navigation Robot Vacuum waxaa loogu deeqay $ 439.99 (kuuban)
Amplifiersyada sidoo kale waxay ku deeqaan awood digniin gaar ah. AX3600 router-ka waxaa lagu qalabeeyay ilaa 6 kor u qaadista waxqabadka sare ee calaamadaha (PA + LNA cod-weyne qaylo weyn).
Tani waxay kordhineysaa kaliya xadka laftiisa, laakiin sidoo kale awooda lagu helo calaamadaha daciifka ah. Xitaa darbiyada qaro weyn dhib kama dhigayaan waxayna ku habboon yihiin guryaha qoysaska waaweyn.
Chipset xirfad u leh ‘Qualcomm’
Gudaha, Qualcomm 6-core IPQ8071A chip wuxuu ka shaqeynayaa 1 GHz, kaas oo loo adeegsado router-yada waxqabadka sare leh ee loogu talagalay shirkadaha waaweyn. Sekanno leh 512 MB Xusuusin iyo mahadsanid qalabkan waxaad maarayn kartaa ilaa 248 qalab daqiiqad
Router-ka wuxuu ka koobanyahay 4 LAN isku xire
Waad ku mahadsan tahay cusub 8 × 8 MU-MIMO iyo tikniyoolajiyadda OFDMA . taleefannada casriga ah ama aalad kale oo leh 6 6 waxay gaari kartaa dardar-gelinta wax ku oolka ah xitaa meelaha dadku ku badan yahay ee leh marinnada dadweynaha sida gegooyinka diyaaradaha, suuqyada wax la iibsado iyo wixii la mid ah.
Teknoolojiyadda aasaasiga ah ee WiFi 6, 8 × 8 tikniyoolajiyadda MU-MIMO waxay taageertaa ilaa 8 durdurro xog isweydaarsi ah. Foomka hore ee isgaarsiinta macluumaadka ayaa ku jira 1: 1 saamiga, laakiin marka la eego adeegga MU-MIMO 8 × 8 tani waxay suurtogal noqon doontaa saamiga 8: 1. Wi-Fi 6, xogta ayaa isku mar la iskugu gudbiyaa iyada oo la adeegsanayo wareegga aaladda isgaarsiinta 8 x 1 gudaha ah ama aaladda 4 a 2 x 2 wareega.
OFDMA waxay ka shaqeysaa mabda’a qaybsiga kanaalada isgaarsiinta wireless. Terminalka kor ku xusan wuxuu kuyaala dhammaan marinnada wirelesska inta lagu jiro waqtiga wada-xiriirka. Heerka Isku-dhafan ee Wi-Fi 6 – OFDMA – wuxuu u kala gooshaa kanaalada wireless-ka ah qeyb hoosaadyo fara badan wuxuuna u uruuriyaa xogta gudbinta isku mar.
Isku-duwaha Sharciga ee NetEase iyo WPA3
Ka sii darane, routerka AX3600 wuxuu sidoo kale soo bandhigayaa xawaaraha NetEase UU, kaas oo ay ugu horreeyaan Shiinuhu (dhibaatooyinka ka jawaabaya iyo xiriirada ay la leeyihiin server shisheeye) markay ciyaarayaan.
Faahfaahinta WPA3 waxay mar labaad horumar ka tahay jiilkii hore, taasoo ka dhigaysa shabakadaada mid amaan ah.
Halka laga iibsado Xiaomi Mi Wifi Router 6 AIoT Router AX3600
Xiaomi Mi Router Wifi 6 AIoT Router AX3600 ayaa waqtigan laga heli karaa Banggood $ 139.99 waana kan qiimaha lagu iibsado sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad heshid ka hor intaadan sii wadin kor u qaadista.